शनिबार, कार्तिक २७, २०७८
कर्पोरेट हाउसहरुको मुठ्ठीमा अर्थतन्त्र फस्ने खतराबाट बच्नका लागि यस्ता काम गर्नु पर्छ !
–कवि दास श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष, भक्तपुर चेम्बर अफ कमर्स
नेपाल जस्तो कम आर्थिक क्षमता भएका देशको अर्थतन्त्र दिगो बनाउनका लागि चाहिने आधारभूत तत्वहरु मध्ये एउटा प्रमुख तत्व हो साना तथा मझौला उद्यमीहरुको बिकास तथा बिस्तार हुनु।
तर केहि केहि कुराहरुमा यहाँ उल्टो परिणाम देखिरहेका छन्। उदाहरणको रुपमा खाद्यान्न प्रशोधन, प्याकिङ्ग तथा बिक्री वितरणलाई लिन सकिन्छ। पहिला दाल चामल लगायतका कतिपय खाद्य सामग्रीको प्रशोधन प्याकिङ्ग तथा बिक्री वितरण कार्यमा साना तथा मझौला उद्यमी हरुको प्रत्यक्ष लगानी र संलग्नता थियो भने हाल बिस्तारै त्यस क्षेत्रमा ठुला उद्यमीहरुको लगानी र संलग्नता बढ्न थालेको देखिन्छ।
त्यसले गर्दा परम्परागत वा पारिवारिक रूपमा कम लगानीमा संचालनमा रहेका उद्यमीहरु बिस्थापित हुन थालेका छन्। प्रविधिको बिकास तथा लगानी योग्य पूँजीको असमानुपातिक वितरणका कारण यस्तो अवस्था आएको हो। सतही रूपमा हेर्दा यो बिकासको एक स्वभाविक चरण जस्तो देखिन्छ। तर यस्ले भोलिको अर्थतन्त्रलाई गम्भीर असर पुर्याउने छ।
यहाँ प्रश्न उठ्छ कि बिस्थापित ति पुराना ब्यबसायीहरु अहिले के गर्दै छन् त? केहि न केहि त पक्कै पनि गरेरै बसेका होलान्। स्तरोन्नति भई अन्य ब्यबसायमा प्रवेश गरेको भए त ठिकै पनि होला। तर केहि बैदेशिक रोजगारीमा पलायन भएका र शेयर बजार जस्तो बाढी आउँदा माछा मार्ने पेशामा रुपान्तरित भएको कुरालाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्दैन।
त्यसले तिनको उद्यमशीलता त मारिने भयो नै तिनका नयाँ पुस्ता त झन ठूला अर्थात् कर्पोरेट भनिएका खेलाडीहरुको सानातिना औजारको रूपमा कार्यरत रहेका पनि भेटिएका छन्। साँच्चै भन्नु पर्दा यस्तो बिषयमा शुक्ष्म अध्ययन अनुसन्धान भएको पनि देखिंदैन। यो त झनै निराशाजनक कुरा हो।
अब केहि आशा जगाउने काम कुरा पनि गरौँ। जसरी आधा पानी भरेको गिलासमा आधा खाली मात्र देखिनु नकारात्मक कुरा हो, त्यसै गरी आधा भरेको मात्र देखिनु सकारात्मक कुरा भएता पनि यथार्थ परक विष्लेषण चाहिँ होईन।
आधा खाली नै हो, आधा भरेकै हो। बरु खाली रहेको आधा हिस्सा कसरी भर्ने भनेर सोच्नु आजको आवश्यकता हो।
जब सम्म आधा गिलास खाली देख्दैनन् तब सम्म त्यसलाई भर्ने सोच नै आउँदैन। पहिला कमीकमजोरीको पहिचान हुनु पर्यो। अनि न सहि समाधानका उपाय निस्कन्छन्।
अतः साना तथा मझौला उद्यमीहरुको बिकास तथा बिस्तार गर्ने तर्फ आवश्यक पहल कदमी गर्नु पनि हाम्रो कर्तव्य हो। प्रश्न उठ्छ, कसरी? यस्को कुनै निर्धारित सूत्र छैन।
निरन्तर अध्ययन अनुसन्धान तथा समाधानका लागि गरिने इमान्दार प्रयास नै यस्को सहि जवाफ हुन सक्छ। त्यसको लागि नयाँ नयाँ ब्याबसायी बनाउन उत्प्रेरित गर्नु, भएकालाई दक्ष बनाउन खोज्नु र समय सापेक्ष परिमार्जन गर्न सक्ने बनाउने प्रयासलाई निरन्तरता दिनु पर्ने हुन्छ। तालिम, गोष्ठी, अन्तरक्रिया कार्यक्रम तथा अध्ययन भ्रमण जस्ता गतिविधिहरुको निरन्तरता नै त्यसको लागि आवश्यक उर्जा हुन सक्छ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको सरकारको पहल कदमी नै हो। सर्वविदितै छ कि हाल सम्म गठित कुनै पनि सरकार यस्तो बिषयमा गम्भिर देखिएका थिएनन्। तसर्थ सरकारलाई झक्झक्याउने काम समेत हामी उद्यमी व्यवसायीहरुको काँधमा पर्न आएको छ।
यसको अर्थ कर्पोरेट सेक्टरलाई गलत भन्न खोजेको होईन। सिमित कर्पोरेट हाउसहरुको मुठ्ठीमा अर्थतन्त्र फस्ने खतराबाट बच्नका लागि साना तथा मझौला उद्यमीहरुको बिकास तथा बिस्तार हुनु पर्छ भन्ने नै यस सानो लेखको मुल आशय हो।
साभार -भक्तपुर चेम्बर अफ कमर्स
राष्ट्र उत्पत्तिको विकासक्रम। नेपाल कस्तो राष्ट्र हो ?
रक्सी खाँदै नखानुहोस्, खानै परे कति खाने ? कसरी खाने ?
राष्ट्रको नामबाट रहेको विश्वकै एक मात्र सम्वत् ‘नेपाल सम्बत्’को प्रादुर्भावलाई हेर्ने सही दृष्टिकोण
अतिक्रमणमा तिहार, तिहारका पाँच तिथि !
लक्ष्मीको पूजा गर्ने पर्व दीपावली
किन रहस्यमयी बन्याे राजा महेन्द्रकाे मृत्यु ?
महामन्त्रीका लागि बालकृष्ण खाण गृहमन्त्री छोड्न तयार